मैले विवाह गर्ने पुरुष ‘ऋषि धमला’ जस्तै हुनुपर्छ” – नायिका केकी अधिकारी (भिडियोसहित):: Mero Desh
मैले विवाह गर्ने पुरुष ‘ऋषि धमला’ जस्तै हुनुपर्छ” – नायिका केकी अधिकारी (भिडियोसहित)
Published on: ८ बैशाख २०७८, बुधबार ०७:०७
‘काठमाडौं ।चर्चित ना’यिका केकी अधिकारीले आफू अहिले विवाह गर्नको लागि मान’सिक रुपमा त’यार नर हेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्र’सारण भ’एको धम’लाको हम’लामा पत्रकार ऋषि धम’लासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।यद्धपी आफूलाई घरपरि’वारबाट भने वि’वाहको लागि आग्रह भैरहेको उनले जानकारी दिईन् ।
‘उनले अझै केही वर्ष विवाह नगर्ने स्पष्ट पारिन् ।उनले भनिन्,‘विवाह गर्नुत छँदैछ, विवाह मनपर्ने संस्थाn हो । त्य’सपछि जी’वन अ’गाडि बढ्छ ।’ उनले आफूले असल जीवनसाथी खोजेको सुनाईन् ।उ’नले आफू क’हिल्यैपनि भूत र भविष्यमा नअल्झिने बरु वर्त’मानमा केन्द्रित रहने व्यक्ति भएको पनि सुनाईन् ।
‘पत्रकार धमलाले ‘अब त’पाईँले प्रेम गर्दा कस्तो युवकसँग गर्नुहुन्छ ? तपाईँको सोच ?’ भनेर राखेको प्रश्नमा नायिका अधिकारीले भनिन्– ‘मलाई एकदमै प्रेरणा दिने व्यक्तिमध्ये मा तपाईँ एक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, सायद मेरो श्रीमानमा तपाईको केही गुण चाहन्छु ।
‘आफ्नो श्रीमतीलाई निकै नै विश्वास गर्ने, सपोर्ट गर्ने, उहाँ ले गर्न चाहेको सपनामा उ’हाँलाई चा’हीँ पुस गर्ने, तपाईमा भएका त्यस्ता गुणहरु पक्कै पनि म मेरो श्रीमानमा चाहन्छु ।
‘हाम्रो नेपालमा भएका विवाहित जोडीहरु मध्येमा तपाई का धेरै गुणहरु धेरै श्रीमानहरुले सिक्न आ’वश्यक छ । र, श्रीमतीहरुले पनि त्यो चिज सिक्न आवश्यक छ ।
यो पनि,,संसारलाइ पछी पार्दै विश्वमै राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली प्रकृति कम्प्युटरलाई च्यालेन्ज पत्रकार नै चकित (हेर्नुस् भिडियो सहित ) सम्मान को लागि एक सेयर गर्नुसनौ वर्षमै प्रकृति मल्ल कक्षा ५ मा पढ्थिन्, त्यही कक्षामा छँदा मल्लको हातमा एउटा कापी पर्यो ! आफू पढ्ने विद्यालयकै माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु, अभिषेक लोप्चनको । कक्षाका अरु विद्यार्थीको तुलनामा छोरीको पनि हस्तलेखन अब्बल भएकोले बुवा प्रल्हादकुमारले लोप्चनको कापी प्रकृतिलाई देखाउनकै लागि घरमा ल्याएका थिए ।
‘त्यही बेलादेखि म पनि ‘अनविलिएवल’ अक्षर लेख्छु भनेर लागेँ’, उनले त्यो बेला मनभित्रैबाट गरेको प्रतिवद्धता फुका इन् । त्यही प्रतिवद्धताअनुसार उनले दैनिक अभ्यास गरिन् । भक्तपुरको सैनिक स्कुलको कक्षा ८ की छात्राको परिणा म निस्कियो, अक्षर हेरेर सबैबाट प्रतिक्रिया पाए, ‘अनवि लिएबल ह्याण्डराइटिङ’ ।
‘फेसबुक र ट्विटरमा छ्याप्छ्याप्ति भएको त्यो ह्याण्ड राइटिङ हजारौंको संख्यामा शेयर भएको छ, लाखौं लाईक, कमेण्ट र ट्विट भएका छन् । उनको अक्षर देखेर सामाजिक सञ्जालमा कमेण्टहरु ‘छक्क’ परेका छन् ।
‘‘वाह !’ भनेका धेरैको अर्को पनि प्रतिक्रिया छ, ‘ गड गिफ्टेड ह्याण्डराइटिङ !कसरी सम्भव भयो ? आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी अर्थात् दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुँदै गएपछि उनीप्रति धेरै शिक्षक हरुको ध्यान गयो ।
‘शिक्षकहरुले कक्षामै र स्कुलमै प्रकृतिको ह्याण्डराइटिङको खुलेरै प्रशंसा गर्न थाले । ‘कापी देख्ने बित्तिक्कै मैले पनि त्यो कापीको भन्दा राम्रो ह्याण्डराइटिङ लेख्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर नियमित अभ्यास गरेँ ।
‘इन्टरनेटमा कुन अक्षरको सेप कस्तो ? हुने रहेछ भनेर आफै पनि खोज्न थालेँ ’ उनले भनिन्, ‘सँधै रुटिनै बनाएर ह्याण्डराइटिङ गरेँ ।राम्रो, आर्कषक अक्षर लेखिएको पढ्न पाए पाठकलाई मात्र नभएर लेख्नेलाई झन् भित्री मनदेखि आनन्द मिल्ने बताउने उनको हस्तलेखनलाई ‘क्यालिग्रा फी’ ले अझ उत्कृष्ट अक्षर बनाउन सघाउ पुर्यायो ।
‘कक्षा ६ सकिएको तर कक्षा ७ नपुगेको शैक्षिक सत्रको संघारतिर उनले क्यालिग्राफीका शिक्षक गोविन्द ओली याबाट सिक्ने अवसर पाइन् । राम्रो अक्षर अझ कसरी राम्रो लेख्ने ? विषयमा भएको तीनदिने तालिमले उनको लेखन शैली र सीपमा निखार भरियो । ‘
‘क्रमशः अक्षरमा थप सुधार आउन थालेपछि पुरानो कपी हेरेर पनि मैले यो अक्षरलाई यसरी सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेँ ।’त्यसपछि पनि उनले मिहिनेत र अभ्यासलाई पछ्याइ रहिन् । त्यतिमात्र होइन उनको अक्षर राम्रो बनाउने अभियानमा उनका बुवा आमा र शिक्षकहरुको साथ, सल्लाह, सहयोग र उत्साह पनि उत्तिक्कै रह्यो ।